धमाधम पालीकाका गाडिमा आगजनी | NepalDut
धमाधम पालीकाका गाडिमा आगजनी
कपिलवस्तु र दाङमा गएराती सरकारी गाडिमा आगजनी गरिएको छ । दाङको पहाडी क्षेत्र बंगलाचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर वली चढ्ने गाडीमा आगजनी भएको छ ।
आगलागी बाट रा १ झ १५२ नम्वरको बोलेरो गाडी पूर्ण रुपमा जलेर नष्ट भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी बेलबहादुर पाण्डेले जानकारी दिए । उँपालिकाको मुर्कटीस्थित वडा नं. ५ को कार्यालय परिशरमा पार्किङ गरेर राखिएको उक्त गाडी कस्ले र किन आगजनी गरेको हो ? भन्ने कुरा खुल्न नसकेको एसपी पाण्डेले बताए । आफुलाई रातको १२स् ५५ बजे गाउँपालिकाको अध्यक्षको गाडीमा आगजनी भएको खवर आएको र त्यस लगतै स्थानीय प्रहरीलाई आगो निभाउन पठाएको एसपी पाण्डेले बताए । ‘म अहिले घोराहीवाट घटनास्थल तर्फ जाँदै छु ।
त्यहाँ पुगेर अनुसन्धान गरेपछि मात्रै कस्ले गरेको हो? भन्न सजिलो होला,’ एसपी पाण्डेले भने । रोल्पा जिल्लासँग सीमाना जोडिएको बंगलाचुली दाङको विकट पहाडी क्षेत्र हो । बंगलाचुलीका अध्यक्ष वली पूर्व माओवादीवाट निर्वा्चित व्यक्ति हुन । तर प्रहरीले भने राज्यद्धारा प्रतिवन्धित पार्टी विप्लव नेतृत्वको नेकपाले उक्त आगजनी गरेको हुनसक्ने पूर्वानुमान गरेको छ । चन्दा माग्ने विप्लव समुह वा कुनै व्यक्ति विषेशले रिसीविका कारणपनि गाउँपालिकाको अध्यक्षको गाडीमा आगजनी गरेको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।
यता कपिलवस्तु जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिकाको गाडीमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेका छन्। गाउपालिका अध्यक्ष बजरंगी चौधरी चढ्ने गरेको लु १ झ ४०० नम्बरको सरकारी गाडीलाई अज्ञात समूहले गएराती आगजनी गरेका हुन्। शनिबार राति सदरमुकाम तौलिहवामा रहेको भाडाको निवास अगाडि पार्किङमा राखिएको गाडीमा राति १०.५० बजेतिर आगजनी भएको हो।
आगजनी किन र कसले गरेको भन्ने आफुलाई कुनै जानकारी नभएको अध्यक्ष चौधरीले बताए। आगजनीका कारण गाडी जलेर पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ। राति नै कपिलवस्तु नगरपालिकाको दमकलले आगो निभाएको थियो। कस्ले र किन जलाएको बारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक दीप शमशेर जबराले बताए।